Iseyintandokazi kusuka ngowe-1966 iToyota Corolla | Bayede News
Home/ Ezezithuthi/Iseyintandokazi kusuka ngowe-1966 iToyota Corolla
AKUTHUSANGA ukuthi isikhondlakhondla senkampani yezimoto emhlabeni iToyota ikumise ukukhiqiza ingungumbane i-Auris indawo yayo ithathwe uhlobo olusha lweCorolla. Indlela iCorolla entsha ebukeka ngayo kuyazisho ukuthi ivala isikhala se-Auris ngoba kukhona okuthi akufane okuqaphelekayo uma ungumuntu ozilandelayo izimoto ikakhulukazi izakhiwo zazo.
Ukufi ka kweCorolla entsha kwamukelwe ngezandla ezimhlophe ngabathengi bezimoto eNingizimu Afrika ngokubheka inani lalolu hlobo oselukhona emgwaqeni noma okwamanje singenazo izibalo ezibambekayo zokudayiswa kwayo. Angingabazi ukuthi ukube ifi ke ngesikhathi esikahle ibizobhincisela nxanye abaningi embangweni wesicoco semoto yonyaka.
ICorolla selokhu yethulwa okokuqala emakethe ngowe-1966 yaba yintandokazi yaphenduka nensengwakazi kwaToyota. Lokhu kwabonakala nangokuthi ngowe-1974 kwaba yimoto edayisa ukuzedlula zonke emhlabeni. Babili bathathu abantu abangenawo umlando ngeCorolla, okungaba ukuthi yayikhona emndenini noma isekhona, yayikhona endaweni noma komakhelwane okanye ezihlotsheni.
Lena yimoto yawo wonke umuntu futhi okuyenze yathandeka kakhulu yingoba iyonga kuphethroli, amaphathi ayo atholakala kalula futhi akuyona imoto ezwelayo. Kungashona ilanga uma ngingalanda umlando weCorolla, kodwa okubalulekile manje ukukhuluma ngalolu hlobo olusha olungena ngaphansi kwesigaba i-C segment hatch.
Lesi yisigaba esingaphansi kwengcindezi enkulu kulesi sikhathi ngenxa yokuqubuka kwesigaba sama-Compact SUV. ICorolla ingena esigabeni esiphethe izinkunzimalanga njengeVW Golf okuyiyona edayisa ukuzedlula zonke, iFord Focus neMazda3. Kungekudala iVW neMazda3 zizokwethula izinhlobo ezintsha, kodwa okwamanje iCorolla iyona eyakamuva.
Isakhiwo seCorolla sithathelwe kuC-HR ikakhulukazi ingaphambili layo ngamalambu acijile aneLED angena agamanxe ezinhlangothini kumafenda. Uma wazi iCorolla kusuka ngowe-1966 uzoqaphela ukuthi selulukhulu ushintsho kulena yakamuva. KwaToyota kubonakala bechithe isikhathi esiningi ngaphandle, base beyalehlisa izinga ngaphakathi kodwa izinto ezimqoka njenge- USB port, iBluetooth, i-Apple CarPlay noma i-Android bazifakile.
Yakhiwa kulayini omusha wesimanje wale nkampani, iToyota New Global Architecture (TNGA) lapho kukhiqizwa khona iPrius esebenza ngogesi, izinhlobo ezithile zeLexus neCH-R. Iphuma nenjini eli-1.2 litre turbocharged ekhiqiza amandla afi nyelela kuma-85kW netorque engama- 185Nm. Kuhlobo lwe-Xs kukhona oludonsa ngamagiya ayisithupha ashintshwayo.
Abayincishanga isikhala ngoba ngemuva bayakwazi ukuhlala ngokukhululeka abantu abathathu, futhi sikhulu nesikhala phakathi kokhakhayi nekhanda. Izihlalo zangemuva ziyakwazi ukulala kwande isikhala sifi nyelele kuma-503 litres. Kwezokuphepha iphuma neStability control, ama airbag ali-7, i-ABS, i-EBD nebrake assist. ICorolla Hatch iphuma newarranty yeminyaka emithathu okanye ibanga lama-100 000km.